Ipensile ebomvu | Ngeentlanzi
Enye yezona zinto zibaluleke kakhulu kwifayile ye- Intlanzi ebomvu ipensile ngumbala wayo. Kunye nemivimbo emithathu emnyama ethe tyaba kwimvelaphi yegolide. Oku kwanda ngamandla ngokuxhomekeke kwintlanzi. Ukuba yindoda endala, umbala obomvu ubomvu ngakumbi. Njengeentlobo zodidi olufanayo, ayinaso isiphelo sedipose.
Zizintlanzi ezinikwe kakhulu ukuze zikwazi ukuhlala kwiilwandle zasemanzini kunye nezinye iintlobo. Ngelixa kufuneka ulumke kwixesha lokudibana. Njengoko Amadoda athambekele ekubeni yindawo enkulu kakhulu kwaye bengahambelani namanye amadoda. Zahluke kakuhle kwabasetyhini. Amadoda akhoyo phakathi kwemigca emibini ephezulu ngombala obomvu oqala ekuzalweni kweliso kwaye udlulele esiphelweni somsila.
Intlanzi ehlala kwidolophu
Intlanzi ebomvu ipensile ngumzekelo we-4 cm, ke ngoko, inokuhlala ngokugqibeleleyo kwi-aquarium engekho ngaphezulu kweelitha ezingama-60. Ziintlanzi ezinolwalamano kakhulu kunye kwaye Kufuneka baphile kwimimandla of, ngeenxa zonke, iintlanzi ezilishumi ukuze bangaziva bedandathekile kwaye banokubhabha. Le yindawo yabo yendalo kwaye le yindlela ekufuneka sibabonelele ngayo kwi-aquarium.
Amanzi kufuneka angathathi hlangothi kancinane. Ukuya kuthi ga kwi-6,5º Ph. Ithambe kakhulu ukuya kubunzima obuphakathi. Inkqubo ye- Ubushushu be-aquarium kufuneka bujikeleze i-24 degrees. Ukuhluza kufuneka kusebenze ngaphandle kokwandisa amasuntswana kunye nokucoca umthwalo we-peat kuyacetyiswa. Utshintsho lwamanzi ngamaxesha athile luyacetyiswa. Phantse zonke iintsuku ezilishumi elinesihlanu.
Ipensile ntlanzi yintlobo ye-omnivorous. Ke ngoko iyakwamkela zonke iintlobo zokutya ngaphandle kwengxaki xa sele iguqulelwe kwi-aquarium. Ngelixa bekwinqanaba lokuziqhelanisa, ukutya okuphilayo okunje ngombungu obomvu nomhlophe, ii-cyclops okanye ezifanayo kufuneka zinikwe.
I-aquarium ifuna ukuba nezityalo ukuze ipensile ikwazi ukuzimela ngaxeshanye isebenza njengendawo yokusabela. Bayakuthanda ukudada kokubini phezu komhlaba nasezantsi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Amanzi olwandle » Ipensile ebomvu
I-Nodulosis, isifo sokungunda kwintlanzi